Ireo fambaran’aretina avy amin’ny firaisana ara-nofo…
Tsara sotroina isan’andro ny ronono!
Amin’izao andro mangatsiaka be izao indrindra no tokony hatao feno otrikaina ny sakafo hanina. Isan’ny mitondra betsaka izany ny ronono. Inona avy moa izany ny voka-tsoa entin’izy ity amin’olona iray? Hoy ny dokotera.
Otra nentim-paharazana : Rora sy sira, … no ampiasaina
Manan-danja tokoa ny otra eo amintsika Malagasy. Betsaka izy ireo amin’izao fotoana : kinésithérapie, ostéothérapie, reflexothérapie sns. Ho an’ny lahatsoratra androany dia ny otra nentim-paharazana Malagasy no ndeha horesahantsika.
Misy fomba fipetraka, mitarika « mycose »!
Mandeha ho azy tokoa eo amin’ny vehivavy ny mampisakambina tongotra rehefa mipetraka ambony seza. Na mahafatifaty aza ny mijery izany dia mety hankarary io fipetraka io satria mahatonga aretina. Toy izao ny fanazavana.
Te-hiala sigara : ireto ny torohevitry ny mpitsabo !
Nankalazaina ny zoma lasa teo ny andro iraisam-pirenena tsy hifohana sigara. Mba hahatanteraka izany fialàna sigara sy paraky izany tokoa dia misy torolalana hataon’ny ivon-toerana CCAA (Centre de Cure Aro Aina) etsy Andravoahangy, mba hanamoràna an’io fialana sigara io.
Aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo ny M.S.T raha atao bango tokana. Misy amintsika anefa no tsy mahafantatra mazava tsara ireo fambara tokony ahiahiana fa tratran’io aretina io ny vehivavy iray. Ireto ny tsara ho fantatra.
· Tsiranoka misy fofona, miloko na mampangidihidy
Amin’ny ankapobeny dia mety misy tsiranoka mandeha amin’ny vehivavy na tsy voan’ny aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo aza izy. Ara-dalàna izy io raha toa ka tsy misy fofona, tsy miloko ary tsy mampangidihidy. Raha mifanohitra amin’izany anefa ilay tsiranoka : misy fofona, miloko mety ho mavo na fotsifotsy na maloto fa indrindra mampangidihidy dia mety ho aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo izy izany. Isan’ny aretina manambara io tsiranoka io ohatra ny “trichomonas”, ity farany dia mahatonga fofona toy ny trondro maina na paoma lo amin’ny vehivavy tratrany.
· Fery amin’ny fivaviana
Ahitana fery amin’ny fivaviana. Mety harary sy hanaintainana izy io. Ny tety sy ny “Herpès genital” ohatra ny aretina tena isehoany.
· Marary ny andovania
Manaintaina be ny andovania, na ilay faritra ankavia sy ankavanana ambanin’ny foitra na ny lalan’atodinaina. Rehefa miparitaka mantsy ny aretina dia tonga hatrany amin’ny tranon-jaza ilay izy ka mahatonga ny manaintaina. Mety hanavy ihany koa ilay vehivavy. Ny “Chlamydia’ izao ohatra no tena voatondro ho aretina miseho amin’izany. Marihina fa mety hahatonga zaza an-tsoso-koditra na fahamombana mihitsy aza ity aretina ity raha tsy voatsabo mialoha sy ara-dalàna.
Aretina tsy misy seho ivelany
Misy ihany koa ireo aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo no mety tsy ahitana seho ivelany. Isan’izany ohatra ny “Chlamydia” sy ny V.I.H. Marihina anefa fa ireto farany dia tokony ho tadiavina rehefa hanao fitiliana mikasika ny M.S.T ny olona iray.
Inona ny fisorohana tokony hatao?
Tsy misy afa-tsy ilay raikipohy A.B.C (Abstinence, Bonne fidélité, Condomn). Izany hoe tsy fanaovana firaisana ara-nofo ; ny fiarahana amin’ny olona iray ihany ; ary ny fampiasana fimailo. Ankoatra izay, dia tokony hanao fitiliana V.I.H ny olona efa manao firaisana ara-nofo, farafaharatsiny in-1 mandeha isaky ny miova olona hiarahana.